बलिउडका चर्चीत पागलप्रेमीहरु
एजेन्सी । बलिउडमा अफयेरको कुरा चल्नु कुनै नौलो कुरा होइन । तर केही सम्बन्धहरु यस्ता छन् जसले सबै फ्यानहरुलाई अचम्ममा पारेका छन् । बलिउड सेलिब्रिटीहरु कोही यस्ता रहेका छन् जो आफ्नो प्रेमका लागि धेरै नै पोजेसिभ हुने गरेका छन् । बलिउडमा पागलप्रेमीहरुको संख्या उत्तिकै उच्च रहेको छ ।
जसका कारण उनीहरु बेलाबेलमा चर्चामा आइनै रहनछन् । पागलपनकै कारण केही बलिउड सेलिब्रिटीहरुले आफ्नो प्रेम समेत गुमाएका छन् । केही यस्ता बलिउडका पागलप्रेमीहरु रहेका छन् जसको पागलपनको चर्चा उत्तिकै हुने गरेको छ ।
बलिउडका दंवग नायक सलमान खान आफ्नो पोजेसिभनेसका कारण मिडियामा निकै लोकप्रिय रहेका छन् । सलमानको पोजेसिभ नेचरका कारण उनकी गलफ्रेण्डले उनलाई छोडेर गइन् ।
ऐश्वर्या रायसँगको प्रेम सम्बन्धका बारेमा धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो । उनको पोजेसिभ नेचरका कारण उनीहरुको त्यो सम्बन्ध टिक्न सकेन । जब सलमान खानले विवेक अब्रोराय ऐश्वर्यासँग डेट गरेको कुरा थाहा पाए सलमानले विवेकलाई रातभर फोन गरेर धम्काएका थिए ।
२.शाहरुख खान र गौरी खान
शाहरुख खान र गौरी खानको लब स्टोरी कुनै परीको कथाभन्दा कम छैन । फिल्मी क्षेत्रमा आउनुभन्दा पहिलादेखिनै गौरी र शाहरुख खान एकअर्कालाई डेटिङ गरेका गर्थे । गौरीलाई लिएर शाहरुख खान एकदमै पोजेसिभ रहेका थिए ।
गौरीलाई कपाल खुल्ला छोडेर शाहरुखले हिड्न दिदैनथे । गौरी यति राम्राी थिइन कि जो कोही उनलाई हेरर लठ्ठ पर्थे । शाहरुखलाई एउटै डर थियो कतै गौरीले कतै छोडेर जाने त होइन ।
३. बिपाशा बासु
बिपाशा बासु विवाह गरेर सेटल भइसकेकी छिन् । तर जोन अब्राहमसँग लब अफयेर हुदाँ उनी निकै पोजेसिभ रहेकी थिइन् । जोन अ्रबाहमसँग सम्बन्ध टुटेपछि उनी हर्मनसँग रिलेसनसिपमा रहेकी थिइन् । हर्मनले खेलेका फिल्ममा आफुलाई पनि खेलाउन उनले निर्देशकहरुसँग समेत अनुरोध गरेकी थिइन् । उनले एउटा फिल्ममा हर्मनको गरेको लव मेकिङ सिन पनि डिलेट गराउन लगाएकी थिइन् ।
४. सैफ अली खान र करिना कपुर
सैफ अली खान र करिना कपुर हाल बलिउडका क्विउट जोडीमा गनिन्छन् । तर सेफ करिनाका लागि निकै पोजेसिभ रहेका छन् । सैफले एक अन्तर्वातामा भनेका थिए,‘करिनासँग कोही अरु एक्टर देखे भने म होस सम्हान सक्दिन, त्यो एक्टरलाई के गर्छु मलाई पनि थाहा छैन ।’
प्रियंका चोपडाद्वारा १ लाख डलर सहयोगको घोषणा
एजेन्सी । अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्नको लागि एक लाख डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा पोष्ट गर्दै कोराना भाइरस संक्रमणविरुद्ध लड्नका निम्ति
काठमाडौँ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण विश्वभर फैलिएर नेपालसमेतलाई प्रभाव पारेपछि सरकारले लकडाउन गरेको आज १३ दिन भइसक्यो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन सबै निकाय ठप्प भइरहँदा भक्तपुरका इँटाभट्टाका महिल